यी हुन शाहरुख खानका हलमा नआएका ५ फिल्म – Etajakhabar
यी हुन शाहरुख खानका हलमा नआएका ५ फिल्म
बलिउडका बादशाह खान शाहरुखले अहिलेसम्म थुप्रै सुपरहिट फिल्म दिएका छन् । अब उनी जिरो नामक फिल्म लिएर आउनेछन् । कतिपयलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि शाहरुखले अभिनय गरेका केही फिल्मले हलको मुखै देख्न पाएका छैनन् । शाहरुख अभिनीत झन्डै आधा दर्जन फिल्म कोही निर्माण पूरा नभई बन्द भएका छन् त कोही मुहूर्त गरेर अघि नबढेका पनि छन् । भारतीय अनलाइनले शाहरुखका केही फिल्मबारे रिपोर्ट तयार गरेको छ ।
अहमक शाहरुख मुख्य भूमिकामा रहेको अहमक हल प्रदर्शनमा भने आएन । सन् १९९१ मा निर्माण भएको सो फिल्ममा शाहरुखका साथमा मिता वशिष्ठ र अयुव खान मुख्य भूमिकामा छन् । मणि कालले निर्देशन गरेको अहमक सन् २०१५ मा मुम्बईमा सम्पन्न एउटा फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन गरिएको थियो । तर, निर्माताले हलमा प्रदर्शन गर्ने इच्छा भने देखाएनन् । हलमा देखाउन उपयुक्त नलागेकाले त्यसो गरिएको अनुमान भारतीय मिडियाको छ ।
रक्स सन् २००१ मा शाहरुख खानले रक्स नामक फिल्मको सुटिङ गरेका थिए । फिल्ममा शाहरुखका साथमा अमिताभ बच्चन र जुही चावला मुख्य भूमिकामा छन् । रक्स किन प्रदर्शनमा आएन, त्यसको कारण भने खुल्न सकेको छैन । बताइएअनुसार अर्थअभावका कारण त्यो फिल्म त्यत्तिकै थन्किएको हो ।
एक्ट्रिम सिटी सन् २०११ मा बनेको एक्ट्रिम सिटी पनि शाहरुखको रिलिज हुन नसकेको फिल्म हो । यो हलिउडको फिल्म हो । जसलाई हलिउड निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसले निर्देशन गरेका हुन् । तर, यो फिल्म अहिलेसम्म रिलिज भएको छैन । फिल्ममा शाहरुखका साथमा टाइटानिक हिरो लियो नार्दाे डी क्याप्रिकोले पनि अभिनय गरेका छन् । यो फिल्म अड्किनुमा ठूलै कारणरहेको बताइन्छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
किसिसे दिल लगाकर देखो सन् १९९६ सुटिङ सुरु भएको किसिसे दिल लगाकर देखो पनि हल पुग्न पाएन । कल्पतरुले निर्देशन गरेको यो फिल्म केही दृश्य सुटिङ गरेपछि रोकिएको थियो । फिल्ममा शाहरुखका साथमा आयशा जुल्का र मधु मुख्य भूमिकामा थिए । निर्माताले वेलैमा रकमको व्यवस्था गर्न नसक्दा अड्किएको यो फिल्म दर्शकमाझ कहिल्यै नआउने पक्का छ ।
शिखर सन् १९९५ मा केही दिन सुटिङ गरिएको शिखर फिल्म पनि दर्शकमाझ आउन पाएन । सुवास घईको निर्देशनमा बनेको शिखरको कथामा अलिअलि हेरफेर गर्ने सल्लाह शाहरुखले दिएका थिए । तर, निर्देशक सुवासले शाहरुखको कुरा मानेनन् । आफ्नो सल्लाह नसुनेपछि शाहरुख पनि शिखरदेखि टाढा भएका थिए । फलस्वरूप शिखर पूरा भएन । पछि, निर्देशक सुवासले शिखरकै कथामा अक्षय खन्ना र ऐश्वर्या रायलाई लिएर ताल फिल्म निर्माण गरे । ताल सुपरहिट भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १९, २०७४ समय: ११:०२:३२
मलेशियाबाट घर बनाउन कति कमाएर फर्के- अशोक दर्जी ? यस्ता यस्ता उपहार पाए (भिडियो)
प्रियंका भन्दा धेरै वर्ष कान्छा उनका प्रेमीकी पूर्व प्रेमीकाले खोलीन् धोका दिने प्रेमीको पोल, के प्रियंका ति युवकसँग प्रेममा जम्लिन् त ?
नायिकाहरुको पाश्रिमिक ५ करोडभन्दा बढी नै हुने गरेकोमा स्व श्रीदेवीकी छोरी जान्वीलाई सुन्दै लाज लाग्ने पारिश्रमिक !
बलिउडमा दिदी हिट, बहिनी फ्लप : काजोल, शिल्पा, ट्विक्ल हिट हुँदा उनीहरुका बहिनीहरु फ्ल्प भएपछि
छाबिराजको ६ करोडको सिनेमा घरमा सिल्पा : हेर्नुस् ओपनिङ्गका बिशेष झलकहरु, (भिडियो सहित)